Shiinaha Qaybo birta ah oo aan fiicnayn | Lead
Haddii aad leedahay qaybo bir birta ka sameysan oo la farsameeyay waxaan ka mid nahay ilaha ugu kartida iyo awooda badan. Faa'iidooyinka: fududaanta alxamida, baaxadda wanaagsan (ma fududa in la jabiyo), cillad, xasillooni wanaagsan (ma fududa in miridhku ka baxo), passivation fudud.
Hadaad leedahay qaybo bir ah waxaan nahay mid ka mid ah ilaha ugu kartida iyo awooda badan.
Noocyada birta ah ee aan lahayn ayaa caan ah?
Birta aan lahayn ee Austenitic: oo lagu calaamadeeyay 200 iyo 300 lambar taxane ah. Qaab dhismeedkeedu waa austenite. Noocyada caadiga ah waa kuwan soo socda:
1Cr18Ni9Ti （321） 、 0Cr18Ni9 （302 、 C 00Cr17Ni14M02 （316L)
Faa'iidooyinka: fududaanta alxamida, baaxadda wanaagsan (ma fududa in la jabiyo), cillad, xasillooni wanaagsan (ma fududa in miridhku ka baxo), passivation fudud.
Faa'iido darrooyinka: gaar ahaan xasaasiga u ah dhexdhexaadka xalka leh koloriin, oo u nugul daxalka walaaca.
Bir aan firxin lahayn: oo lagu calaamadeeyay 400 lambar taxane ah. Qaab dhismeedkeeda gudaha waa mid qumman, qeybtiisana chromium waxay ku jirtaa inta u dhaxeysa 11.5% ~ 32.0%.
Noocyada caadiga ah waa kuwan soo socda:
Faa'iidooyinka: ka kooban chromium aad u sarreeya, kuleylka wanaagsan ee kuleylka, xasilloonida ayaa ka wanaagsan, kuleylka kuleylka wanaagsan.
Faa'iido darrooyinka: Qalabka guryaha oo liita iyo waxqabadka geedi socodka.
Birta aan lahayn ee Martensitic: oo lagu calaamadeeyay 400 lambar taxane ah. Qaab dhismeedkeedu waa martensite. Qaybta ugu badan ee chromium ee birta noocan ahi waa 11.5% ~ 18.0%.
Faa'iidooyinka: Waxyaabaha kaarboonka badan, adkaanta sare.
Faa'iido darrooyinka: caaga oo xumaada iyo alxanka.
Waa Maxay Codsi Ahama Ahama Birta Ugu Badan ee Loo Adeegsado?
Qaybaha birta ah ee aan caadiga ahayn waxaa badanaa loo isticmaalaa: weelasha, gacmaha, qeybaha badda, qeybaha injiinka, maacuunta wax lagu karsado, aaladaha caafimaadka, qalabka isbitaalka, qalabka shaybaarka, taangiyada cadaadiska, dhejiyeyaasha, qaybaha baabuurta, taangiyada cadaadiska, dhejiyeyaasha iyo qaybaha dhismaha.
Mashiinka tayada ka shaqeeya 304 ahama. Waxaan ku kari karnaa qaybo adag mashiinadayada CNC Swiss iyo xarumaha leexinta CNC.
Daawaha birta aan xarka lahayn ee 304 waa qalab aad u qiimo jaban oo caan ah, oo ku habboon qaybaha u baahan sameynta ama alxanka. Waxay leedahay daxal aad u fiican, qayilo, iyo iska caabin kuleylka waana tan ugu alxanka badan ee walxaha birta ah. 304 maahan magnetic.
304 waxay leedahay qodob qiimihiisu yahay 5.0 marka la barbar dhigo birta 12L14. Way ku fiican tahay alxanka waxayna soo saartaa alxamooyin adag oo duug ah. 304 kama jawaabo daaweynta kuleylka, laakiin waxay noqon kartaa qabow la shaqeeyay si loo kordhiyo xoogga iyo adkaanta. Daahfurka waxaa lagu talinayaa ka dib foojarka iyo shaqada qabow.
Boolal iyo lows
Components Qalabka baabuurta
Mashiinka Mashiinka Lead Lead Wuxi waxay soo saartaa qaybo bir ah oo aan lahayn iyadoo la adeegsanayo habab badan oo kala duwan: makiinado, shiidid, rogid, qodista, goynta laser, EDM, karbaashid, bir xaashi, shubid, been abuur, iwm.
Hore: Qaybo naxaas ah
Xiga: Qaybaha Aluminium